ABIY AHMED oo maanta fuliyey mid ka mid ah ballan qaadyadii uu sammeeyay - Caasimada Online
Home Warar ABIY AHMED oo maanta fuliyey mid ka mid ah ballan qaadyadii uu...
ABIY AHMED oo maanta fuliyey mid ka mid ah ballan qaadyadii uu sammeeyay
Addis Ababa (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa qaaday talaabo lidi ku ah maamulkii isaga ka horeeyay kadib markii uu shaqada ka eryay Saraakiisha gacanta ku hayay Xabsiyada Ethiopia oo horay looga dardaarmay.
Ra’isul wasaare Abiy Axmed ayaa waraaq kasoo baxday Xafiiskiisa ku eryay 5 Sarkaal oo dowlada mas’uul uga ahaa Xabsiyada waaweyn ee magaalada Addis Ababa.
Abiy Axmed, ayaa Saraakiishaasi ku eedeeyay inay ku tunteen maxaabiista isla markaana seejiyeen daryeelka ay ugu tallo gashay dowlada.
Abiy Axmed, waxa uu sheegay in talaabada uu ku eryay Saraakiisha ay qeyb ka tahay ballanqaadyo uu sameeyay xiliga magacaabidiisa, waxa uuna ku goodiyay inay sii socon doonto xil ka qaadista kuwa ku sifoobay dhibaateynta shacabka.
Geesta kale, Abiy ayaa ka digay in lagu xadgudbo sharciyada dalka u degsan waxa uuna ku baaqay in la wanaajiyo dadka shacabka ah.